NAY LIN AUNG – FINANCE & ACCOUNTANCY ACADEMY
Nay Lin Aung Finance and Accountancy Academy
NLA FAA is established since 1996 in Kamayut Township Yangon, the very birth place of the Yangon university where many students admitted to grow their education for the career. In 1998 it’s becomearegistered finance and accountancy school under LCCI UK and in 2010 it has been recognized as one of the most improved school by LCCI UK not only in Myanmar but also for the while Asian continent.NLA FAA has started its trainings of professional accounting from 2007-2008 and becomingaGold Partnership School of ACCA in 2015.In broad ACCA training fields, NLA FAA becomes Myanmar’s Top school providing training to hundreds of students learning ACCA and it is also achieved Professional Gold Approved learning partner of ACCA(UK) in2016. Besides, NLA FAA opened supporting courses in the CPA subjects of Financial Accounting and Cost & Management Accounting of Myanmar Accountancy Council since 2002 and it has officially become the private school recognized by Myanmar Accountancy Council in 2017.
LCCI LEVEL I & II (UK)
LCCI LEVEL III (UK)
-251Days -4Hours -34Minutes -25Seconds
-247Days -4Hours -29Minutes -58Seconds
-249Days -4Hours -30Minutes -35Seconds
-249Days -4Hours -29Minutes -37Seconds
Upcoming Education Exam to test your brain.
LCCI Level III Exam
Exam (7) ကြိမ်ဖြေဆိုနိုင်သည့်လများမှာ January, April, June, July, September, November, December ကျောင်းမှဖြေဆိုရန် အတွက် ရွေးချယ်ထားသော လများမှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ Calendar Year အရ April, June,...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး CBE Center ဖြစ်သည့် NLA FAA ၏ CEB Center တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ACCA ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ ၄၀ ကျော် တစ်ပြိုင်တည်း AB (F1), MA (F2), FA (F3), LW (F4) ဘာသာရပ်များ...
How people said about Ours Education
Nang Kham Moon Moon
ACCA(UK) Top Achiever, CPA Completion
Top Achiever ရရှိအောင် သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ACCA ကဆရာ/ဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်း အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီ LCCI တက်နေကြတဲ့သူတွေ၊ ဒီမှာတက်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးက အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ တက်နေကြတာများပါတယ်ရှင့်။ စာကြည့်ချိန်ဆိုတာ သိပ်မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာတို့က စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ မေတ္တာအပြည့်အဝနဲ့ သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အတွက် စာမေးပွဲကို အမှတ် များများနဲ့ အောင်ကြတယ်ဆိုတာ ညီမ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ACCA ရော CPA ပါ ဆရာတို့ဆီမှာ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တက်ခဲ့တာပါရှင်။ ဆရာတို့က Theory တွေသင်ကြားပေးတာဆိုတာထက် လက်တွေ့နဲ့လည်း အသုံးချတက်အောင် ဆရာတို့က သင်ကြားပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ စာမေးပွဲ ဆိုတဲ့ ရှေ့တန်း စစ်ပွဲမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ညီမတို့ကို လက်နက်အပြည့်အစုံ တပ်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကျောင်းသားတွေ ဆုယူနိုင်တယ်လို့ ညီမယုံကြည်ပါတယ်။
Soe Thiha Linn
ACCA လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဦးနေလင်းအောင်နှင့်အတကွ NLA FAA ကဆရာ/ဆရာမများကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းရဲ့ အဓိက အားသာချက်တစ်ခုကို ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းမှာဆိုရင် အဓိကက ACCA တက်တဲ့အခါမှာ Revision kit စာအုပ်တွေ Text Book စာအုပ် Original စာအုပ်တွေကို Copy Right နဲ့အညီ သိက္ခာရှိရှိနဲ့ လိပ်ပြာလုံလုံ ကိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အတွက်လည်း စီစဉ်ပေးတဲ့ ဆရာ/မ များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်